China Factory fonosana automatique sy mpanamboatra | TUBO
Steel Tube & Pipe mandeha ho azy fonosana milina:
Milina fitehirizana sy milina fametahana azy
Ny milina fanangonana mandeha ho azy dia ampiasaina hanangonana, hametahana fantsom-by amin'ny zoro 6 na 4, ary hamehezana ho azy. Mihazakazaka miadana tsy misy fandidiana tanana. Mandritra izany fotoana izany, esory ny tabataba sy ny dona amin'ny fantsom-by amin'ny fantsom-by. Ny tsipika fanangonantsika dia afaka manatsara ny kalitaon'ny fantsonao sy ny fahombiazan'ny famokarana, mampihena ny vidiny ary koa manala ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana.
1.Fametahana sy famonosana AUTOMATICALLY.
2. fantsona ambonin'ny tany lavorary.
3.Ny asa kely, ny hery miasa ambany.
4.Automatika fandidiana, ambany tabataba.
Ireo fantsona dia ampitaina amin'ny faritra amboara amin'ny latabatra mandroso:
1.Pipa mivadika milina fanangonana
Ireo fantsona dia hivadika any amin'ny fitaovam-pitaterana rojom-panorona amin'ny alàlan'ny fitaovana fitodihan'ny fantsona ary avy eo hafindra amin'ny toeran'ny fanisam-bato;
2. fanisam-pipa sy fametahana
Ny rafitra dia manana programa napetraka fa firy ny fantsom-pipa ilaina ao anaty amboara ho an'ny habe samihafa, avy eo ny rafitra dia handefa ny baiko ho an'ny milina manisa sy manangona ny sosona fantsona mandra-pahatongan'ny fantsona ampy will handeha ny fitaovana fanangonana fantsona midina ny haavon'ny sosona iray rehefa angonina ny fantsona iray ary atosika mankany amin'ny fitaovana fanangonana ； misy koa fitaovana fampifanarahana faran'ny iray amin'ny lafiny iray;
3. Fitaterana be sandry
Ny fantsona fantsona iray manontolo dia hafindra amin'ny toeran'ny bundling amin'ny fiara fitaterana, avy eo ny fitaovana fanangonana dia hiverina amin'ny toerana manangona miandry amboara vaovao;
4. Fitaovana bundling automatique
Ny fitaovana fametahana automatique mihantona dia hiasa ho toy ny fepetra takiana amin'ny fehin-kibo fehikibo isaky ny dingana; ny fandrosoana dia: ny milina famafana dia hifindra amin'ny toeran'ny bundling ary hifandray amin'ny sosona ambony fantsona, hikatona ny fantsom-pitantanana fehikibo, ny lohan'ny fehikibo dia handefa ny fehikibo, hampifandray ny fehin-kibo, avy eo manamafy ny fehikibo, ny fikororohana ary avy eo manapaka ny fehikibo; aorian'izany dia hisokatra ny fantsom-pitantanana fehikibo, hiverina amin'ny toerana voalohany ny lohan'ny bundling ary manomana ny fametahana manaraka;
Ireo fantsom-pifamoivoizana dia hoentina any amin'ny toerana itahirizana azy amin'ny alàlan'ny fitaovana fitaterana rojo fitehirizana, hiverina ny fiara mpitatitra ary miandry ny fonosana manaraka;
Ny faritra fitehirizana dia hitahiry fonosana telo ary hafindra amin'ny faritra fantsona vita amin'ny crane;
Ny bisikileta: ny fizotrany manontolo dia ho fehezin'ny PLC indostrialy ho azy, ary manana ny fifehezana ny tanana sy ny mandeha ho azy hiantohana ny famokarana mitohy sy ny faharetan'ny asa;
Previous: ERW 219mm Tube Mill
Manaraka: ERW 32mm Tube Mill
Masinina fonosana fantsona mandeha ho azy
Masinina fonosana vy mandeha ho azy
Milina fonosana fantsona mandeha ho azy
Masinina fonosana vy mandeha ho azy feno